Assanati Famo Gidraka: Hifety mandritra ny 7 andro
mercredi, 07 février 2018 19:53
Vory lanona eto Mahajanga avokoa ireo solontena mpitarika ny fikambanana Assanati Famo Gidraka avy any amin'ny faritra maro (Antsiranana, Vohémar, Antsirabe, Toamasina, Fenoarivo Atsinanana, Fianarantsoa...).
Hanatanteraka fifampiarahabana tratra ny taona 2018 no anton'io hetsika izay atao mandritra ny herinandro io. Ny tolakandro teo ary no nanokafana izany ka nisy ny fanesena omby matavy avy amin'ny filoham-boninahitry ny Fikambanana, ramatoa Assanati. Niainga teny Tsararano ny diabe ary nihazo ny Lapan'ny Tanànan'i Mahajanga.
Homena fiofanana mahakasika ny asa sosialy mandritra izao fihaonana izao ireo mpitantana isaky ny faritra samihafa ireo mba ahafahany mitarika ny mpiara-belona hanao asa soa izay tanjona voalohan'ny fikambanana Assanati famo gidraka.
Rahampitso no fotoan-dehibe ao amin'ny Tranoben'ny kolontsaina miaraka amin'ireo mpikambana rehetra eto Mahajanga.